Dadka caanka ah waxay noolaadaan waqti dheer – Somali Paper
Waxaa la daabacay June 7, 2017
Raadinta tiro badan oo saaxiibo ah baraha bulshada dhexdeeda ayaa ahayd sannadihii u danbaysay mid abuuurtay tartan ayna cidina ka maqnayn, dhalaanka dhabta hooyadood fadhiya, dhalinyarta gaashaan qaadka iyo odayada facebook ku dirirkuba halgan ayay u galeen sidii mid waliba u heli lahaa tiro badan oo ciidan dhinaca faalla bixinta iyo sii faafinta warkooda qaabilsan daacadna u ah riixidda suulka xitaa hadii ayna qancin xogta uu daabacay.
Diraasado la sameeyey ayaa sheegaya hadii aadan caan ahayn baraha bulshada dhexdooda ama aadan soo jiidan dareenka asxaab badan, warkaaguna uusan ardaagaaga dhaafin in caafimaadkaagu halis ku jiro lagana yaabo inay ku disho maalin maalmaha kamida inkasta oo rumaysashada natiijooyinkan laga yaabo inay kugu adag tahay.
Julian Holt-Lunstand oo ah khabiir cilmi nafsiya kana tirsan jaamacadda Brigham young University ayaa macluumaad uu ka soo uruuriyay 148 diraasad iyo baritaano la sameeyey 28-dii sannno ee u danbaysay oo la xiriira saamaynta xiriirka bulshada uu ku leeyahay qofka ayaa waxa ka qayb galay in ka badan 308,000 qof oo ay u dhaxayso da’doodu 6-92 sano kuna sugan daafaha caalamka.
Dadka ka qayb qaatay diraasadahan ayaa mid walba qiyaas lagu sameeyey tirada asxaabtiisa, hadii uu kaligii nool yahay iyo sidoo kale kaalinta uu ka qaato arrimaha bulshada. Muddo dheer oo 10-naan sanno ah ayaa la daba socday iyada oo la diiwaan gelinayo xiriirka ka dhexeeya dhimashadooda iyo tirada asxaabta ay leeyihiin.
Diraasadan ayaa shaaca ka qaaday in dadka kelida ah ama aanan lahayn asxaab badan ay ka cimri gaaban yihiin kuwa leh shabakad wayn oo asxaab ah.
Professor Julian ayaa gabagabadii diraasadan u soo baxday in dadka leh kooxo asxaab ah ay noloshoodu siyaaday 50% halka dadka xiriir guur oo wanaagsan sameeyey uu kor u kacay 90% marka loo barbar dhigo kuwa aanan saaxiibo lahayn ama xiriir xun ku jiray.
Saamaynta saaxiib la’aanta ayay culimada daraasaddan sameeyey barbar dhigeen saamaynta uu ku leeyahay cabista sigaarku caafimaadkeenna iyagoo sheegay in culayska saa’idka ah, Jimicsi la’aanta iyo cabidda Alcohol badan ay ka sahlan yihiin saaxiib la’aanta ama cidlada.
Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta aynu badanaa u raadinaa dad badan oo baraha bulshada inagula saaxiiba oo qoraaladeena sii faafiya madaxeenana kor u yara qaada, Daraasad dhinaca cilmiga maskaxda ayaa iyaduna sheegtay in waayidda dareen soo jiidasho baraha bulshada dhexdeeda ay saamayn ku samayso DNA qofka, Inkasta oo saamayntaasi ay yar tahay haddana maaha mid la iska indha tiri karo.
Sida ay xuseen labadan khabiir Georgia Blavis iyo Steve Colis oo ka tirsan jaamacadda UCLA ayaa sheegay in qaar kamida unugyada yaryar ee ku jira dhiiggeenna ay joojiyaan shaqada marka dareenkani yimaado kuwaas oo masuul ka ah qaybo ka mida difaaca jidhkeenna sida bogsiinta nabarada iyo ka hor taga qaar kamida bakteeriyada.
boqolaal qarni ka hor ninku waxa uu raadin jiray saaxiib kale oo ka difaaca cadawga soo weerara, garabkiisana taagnaada marka uu dagaal galayo laakiin marka ay dhacdo inuu kaligii noqdo waxa uu adeegsan jiray tamarta jidhkiisu isaga difaaco xanuunada si uu cadawga ugu waajaho taas oo keeni jirtay in uu nuglaado dhaawacyada soo gaara ka soo kabashadooduna ku adkaato maadama u isticmaalay awoodiisa difaaca jidhka.
Saaxiibtinimo kala noqoshada facebook waxaa laga yaabaa inayna la mid ahayn qaniinyada libaaxa ee awoowyadeenii hore ka cabsan jireen laakiin waxa la ogaaday inay saamayntoodu isku mid tahay, dareenka cidlada, niyad jabka iyo welwelka joogtadi ah waa sababta aynu maanta u aragno xanuuno badan sida kansarka, Neefta, Alzheimer.. iwm.
Jawi bedelashada facebook , twitter iyo goobaha kale ee bulshada markii aad muddo joogtaba kuma dilayso laakiin dareenka inaadan haysan dad badan oo sawiradaada iyo qoraaladaada danaynaya, xiisana u qaba inay Like saaraan waa halis naftaada sahayan karta.
Tixraac: Newyork Times
Dadka badankiisu marka ay maqlaan aqoonyahan, caaqil, hanad iyo magacyo kale oo badanaa ka…
Maxaynu u hadalnaa markaynu hurudno?
Ma ogtahay sababta aynu u hadalno marka aynu hurudno? Daraasad cilmiyeed la sameeyey ayaa …
Daraasad cusub oo ay samaysay Haayad ka hawl gasha dalkaasi Britain ayaa ka digtay halista…
8 Arrimood oo dila mooralka caruurta
Daraasad lagu sameeyey dalka Brazil ayaa sheegtay 8 arrimood oo ay u badan tahay in ilmaha…